Horudhac: Watford vs Liverpool… (Kooxda dhinaceeda dhulka la dhigi la’yahay ee Reds oo caawa booqanaysa Vicarage Road) – Gool FM
Haaruun February 29, 2020
(Watford) 29 Feb 2020. Kooxda aan dhinaceeda dhulka la dhigi karin ee Liverpool ayaa kulan ka tirsan horyaalka Premier League waxa ay booqanaysaa garoonka Vicarage Road, halkaasoo ay caawa kula soo ciyaari doonto Watford oo ka mid ah saddexda naadi ee ugu hooseysa horyaalka.
Kooxda Liverpool ayaa ku sii dhoweynaaysa hanashada horyaalka Premier league, waxaana ay doonayaan inaan dhinaceeda dhulka la barin oo ay guuldarro la’aan ku qaadaan horyaalka.
Taariikhda: Sabti, 29 Feb 2020
Tababaraha Watford ee Nigel Pearson ayaa ku soo bilaabi kara kulankan garabka Ismaila Sarr, kaasoo dhaawac dib uga soo laabtay bedelna ku soo galay kulankii ay Axaddii la soo dhaafay wajaheen Manchester United.
Kiko Femenia ayaa sidoo kale ku jira, halka daafaca Daryl Janmaat uu dib ugu soo laabtay tababark isbuucaan.
Laacibka Liverpool ee James Milner ayaa markale sii maqnaan doona kaddib dhaawac muruqa ah oo uu sheeganayo, laakiin waxa uu soo laaban karaan kulanka Talaadada ay la leeyihiin Chelsea ee tartanka FA Cup-ka.
Jordan Henderson iyo Xherdan Shaqiri ayaa sii wadan doona maqnaanshahooda.
>- Liverpool ayaa guuleysatay 18-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Kooxda Liverpool ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 31 ka mid ah 36-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Liverpool ayaa barbaro gashay qeybta hore, isla markaana guuleysatay ciyaarta oo dhammaystiran saddexdii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Reds ayaa guuleysatay qeybta hore iyo kulanka oo dhammaystiran 6 ka mid ah siddeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Watford tartammada oo dhan.
>- Liverpool ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la dheeshay kooxda Watford tartammada oo dhan.
>- Kooxda Liverpool ayaa guuleysatay 7 ka id ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la dheeshay Watford tartammada oo dhan.
>- Reds ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay shan ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahaayeen horyaalka Premier League.
>- Kooxda Watford ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay horyaalka Premier league.
>- Liverpool ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahaday Watford tartammada oo dhan.